Wariye Coldoon Oo Xabsiga lootaxaabay.. – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Wariye Coldoon Oo Xabsiga lootaxaabay..
by admin 18th April 2019 0127
Wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon, ayaa wararku Sheegayaan in xabsiga ay u taxaabeen ciidamada booliska Magaalada Buro ee gobolka Togdheer.
Qaraabada Wariye Coldoon ayaa sheegay in markii la qabanayay uu gaadhi dhex watay suuqa, ka dibna ay ciidamadu gaadhigiisa ku weerareen, isagoo markii dambe intuu gaadhiga ka degay galay guri, ka dibna ay sidaas ku qabteen ciidanku.
Booliska Togdheer ayaa horey u sheegay in maxkamadda Hargeysa waaran qabasho ah looga soo jaray weriyaha, Waxaana dhowaan uu kasoo Noqday Dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya.
“Waan ka xumahay inuu taladaydi qaadan waayey, waan ka xumahay in shacab la haysto uu hiil biday, waan ka xumahay inuu gacanta u galo kuwo illaahay ka maarmay, Coldoon waxaa ayaandaro ah inay basaaseen labbadiisi saaxiib ee sawirqaadayaasha u ahaa “ Ayuu yidhi Cabdirisaaq Terra oo kamid ah dadka Xadhigiisa ka hadlay.
Wariye Coldoon ayaa Mudooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Burco oo dhuumasho uu ku Joogay, Wuxuuna dhowaan sheegay inaan dhowr Todobaad Salaad Jimce ku Tukan Jamac, isagoo ka Cabsi qabay in la xidho.
Ciidan ilaalinjiray Xarumaha ugu muhiimsan dalka oo iskaga hayaamay dalka.
Shir looga hadlayo Hiigsiga Somalia Oo Maanta Ka furmaya Jabuuti.